Top Tobanka DVD Creator Wixii Windows 10
Windows 10 waa nidaam cusub ee qalliinka on block ka, iyo waxa uu hore u celiyaa badan oo dadka isticmaala. Haddii aad rabto in aad isticmaasho Windows 10, waxaad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan barnaamijyada waxaad isticmaali kartaa la.
Mid ka mid ah meelaha aad u baahan tahay in la tixgeliyo eegaya barnaamijyada waa freeware; barnaamijyada iyo barnaamijyadooda noqon karaan kuwo qaali ah soo jiidasho leh si deg deg ah marka aad computer cusub oo ay leeyihiin, si freeware - ama software in aad kala soo bixi kartaa oo ay isticmaalaan ka bixin - waxa uu faa'iido wayn.
Abuure DVD for Windows 10 sidoo kale waa mid waxtar leh - Way fududahay in la badiyo xogta, iyo sidaas isagoo gurmad ah had iyo jeer waa fikrad wanaagsan. Software abuure DVD macnaheedu noqon karaa in aad dib kartaa xogta aad, ama abuuro filimada guriga si loo siiyo saaxiibada iyo qaraabada, ama kaliya abuuro disc lagu kaydiyo oo dhan xusuus muhiim ah.
DVD-yada waa weyn ujeedooyin kaydinta. Waxay u badan oo data, ay yihiin dhaawac-caddeyn oo waxay qaadan socda si ay jirin meel dukaanka. A abuure fiican DVD lacag la'aan ah 10program Windows kaa caawin doona inaad la abuuro hayaan, filimada iyo xal kaydinta warbaahinta aanay ku kicin lacag ama inay wax bartaan adag.
Qeybta 1: talinayo DVD Creator for Windows 10
Qeybta 2: 10 DVD Creator for Windows 10
Qeybta 1: talinayo DVD abuura u Windows 10
Talinayo: Wondershare DVD Creator (for Windows & Mac )
Wondershare DVD Creator waa software abuure sahlan in la isticmaalo DVD oo u suurta galinaya in aad sameysato DVD ah professinal raadinaya gudahood tallaabooyinka. Iyadoo la dhisay-in arrimo badan oo aad DVD Menu, waxa aad awoodi kartaa in la abuuro DVD cajiib badan abid. Waxa ay taageertaa Windows 10 iyo versions kale horaantii Windows.
Taageero kasta oo caan ah qaabab video aqbasho.
Samee DVD ah xirfad leh 40 arrimo menu + xirfad loogu talagalay.
Shakhsiyeeyo videos iyo arrimo menu hor cajalid gubanaya.
La wadaag DVD ku abuuray saaxiibadaa iyo qoyskaaga.
OS taageerayaan: Windows 10/8/7 / XP / Vista / 2003 / Windows 10 , Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Qeybta 2: The Software Top 10 DVD Samaynta
1. Ainishare DVD Kan sameeyey,
Software Tani waxay abuurtaa videos tayo aad u sarreeya ka qeexidda caadiga ah ama faylasha qeexitaanka sare. Intaa waxaa dheer, waxaa jira waxyaabo badan oo kala duwan oo aad u isticmaali karto editor dhisay-in; dalagga, fidin gooyaa oo ay ku soo celiyaan / loop aad files. Tani waxay aad u jeestey a video abuure koobi-koollada galay artist ah. Saameyntaas kordhiyo si ay awoodaan in ay ku darto watermarks iyo subtitles this doorashada weyn abuuraha DVD for Windows 10 oo ah samaynta.
Baro wax badan oo ku saabsan Roxio MyDVD >>
2. Si aad u aragto software
Tani waxay u ogolaaneysaa in aad qaadato files ka qaabab kala duwan, iyo sidoo kale iyaga u noqon qaababka DVD kala duwan. Waxaa oo dhan ee hal software la dhamaystiran laakiin sahlan in la fahmo user interface.
Muuqaalada Cool of software waxaa ay awoodaan in ay jiidi oo hoos u si toos ah uga Internet Explorer, bedesho saamiyada ee ilaha kala duwan - ay ku jiraan maqal ah oo wax soo saar HTMI. Waxa kale oo la Timaadda Meyeydaan casriyaynta oo lacag la'aan ah iyo taageero macaamiisha, taas oo ka go'antahay in ay mustaqbalka, iyo lagama maarmaanka ah in a
Badan oo ku saabsan software Aone Baro >>
Haddii aad rabto in la abuuro filimada guriga sida labada uruuriyaa shakhsi ama siiyo sida hadiyado kuwa jecel yahay, ka dibna DVDFab laga yaabaa in software aad u. Waxay abuurtaa aad, videos tayo aad u sarreeya in tiro ka mid ah qaabab kala duwan, taasoo la micno ah in aad yeelan doontaa in ay iska bixin DVD ah oo aan haysan si dhibta qofka aad u dhiib. Waa jilitaanka si dhakhso ah, oo waa weyn. Muuqaal kale oo waa weyn yahay in ay kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan ka badan hal DVD waqti. Tani waa gunno loogu talogalay dadka u baahan DVDs in la abuuray si deg deg ah.
Baro wax badan oo ku saabsan DVDFab DVD Creator >>
DVDFlick waa quruxsan dareen leh, quruxsan awood badan, iyo dhammaan agagaarka barnaamij weyn u jeestay gurigaaga video files galay DVDs guriga. DVDFlick yeelan karaan waxaad badbaadin faylasha aad iyo waxay qaadan doontaa guud ahaan grand 45 qaabab, iyaga badalo oo ay iyaga akhrin karo DVD ah. Waxay leedahay interface sahlan in ogolaanayaa in aad abuuri DVD kuu gaar ah, oo lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan, ma xadhig ku lifaaqan.
Baro wax badan oo ku saabsan DVDFlick >>
Windows Media u badan tahay waa in aan la tixgelin Player sida DVD abuure. Waa ciyaaryahan music ah. Si kastaba ha ahaatee, sida Windows Toban kuma jiraan DVDMaker, hawsha ah DVD abuure in-dhisay dhaco si windows media player. Ciyaaryahanka Windows Media yaqaan in inta badan oo idinka mid ah uu noqon doono - waxaa ahayd on nidaamka Windows tan iyo bilowgii aad. Dabcan, haatan waxa ay leedahay qaababka badan oo dheeraad ah. Si fudud u tagaan "Guba" doorasho ee ciyaaryahan warbaahinta si aad u bilowdo.
Baro wax badan oo ku saabsan Windows Media Player >>
6. Free Gubidda Studio
Free Gubidda Studio waa barnaamij weyn yar midkood taageerto ilaa xogta aad, ama abuuraya ururinta maktabadda guri ka videos. Waxay leedahay qaab sahlan in la isticmaalo iyo interface, oo waxaa inoo wanaagsan ammaanka iyo fududaato in la isticmaalo.
Baro wax badan oo ku saabsan Free Gubidda Studio >>
Tani waa software awood leh gubashadii in uu leeyahay muuqaalada kala duwan. Marka hore ku gubi kartaa DVD duwan ee hal mar iyo Muuqaal ah oo quruxsan laga cabsado in uu leeyahay waa awooda in la abuuro files ISO, taas oo macnaheedu yahay waxaad bilaabi kartaa habka gurmad ah loo eegin in aad leedahay DVD faaruq inay gacanta. Waxaad badbaadin karo faylasha ISO oo iyaga ka dib wareejiyo.
Baro wax badan oo ku saabsan iOrgSoft >>
Marka aad doorato miniDVDsoft software DVD gaare, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u abuuraan DVDs ka mid ah qaab kasta oo file video. Xataa waxaad abuuri kartaa filimada DVD ka mid ah aad NTSC ama Pal videos si aad iyaga ku yeelan karaan ujeedooyin kaydinta iyo hadiyad. Waa lacag la'aan ah, si degdeg ah oo dadka isticmaala ku siinaysaa fursad ah in la abuuro bedeley DVD soo jeeda shakhsi iyo codka; oo u ogolaanaya wax soo saarka ee videos sheegay in Dolby goobaha cod ah.
Baro wax badan oo ku saabsan MiniDVDSoft >>
9. SoThink DVD Movie Kan sameeyey,
SoThink ayaa interface fudud-raadinta. Waxaad ma aha inay inkastoo dhayalsan, sababta oo ah, abuure DVD, waayo, Windows 10 ma aha oo kaliya siinayaa ikhtiyaarka ah DVDs gubanaya, laakiin waxa uu leeyahay ka dhisay-in editor oo kuu ogolaaneysaa in aad jaraan kuwa daqiiqo xad-dhaaf ah meesha aad qalad ku leh camera .
Baro wax badan oo ku saabsan SoThink DVD Kan sameeyey Movie >>
Kan sameeyey DVD Tani waa doorasho ugu fiican ee DVD abuure for Windows 10 idiin, iyadoo aan loo eegin in aad rabto in la abuuro DVDs xirfad iib ama kaliya leedahay maktabad ee filimada kuu gaar ah shakhsi ahaan loo isticmaalo.
Waxaa si deg deg ah ka shaqeeyaa, si hufan, oo uu idin wada siiyo xalal badan oo aan aad wareeriya. Fursadaha waxaa ka mid ah koob cutubka, subtitles, iyo urur dhex abuurka bogaga ku jira.
Baro wax badan oo ku saabsan WinX DVD Author >>
Gebogebadii, waxaana idin siiyey toban ka mid ah, abuure DVD ugu fiican ee Windows 10 diyaar u ah abuurista DVDs makiinad socda habka ugu dambeeyay ee ka hawlgala Windows. Haddii aad raadinayso wax si ay u abuuraan isku waslad cusub ee farshaxanka, wax ay wadaagaan oo xusuusan Xusuus weyn jeer qoyska, ama gurmad ah sida ammaanka ah ee xogta aad, waxaa jira hal xabbad talo jiro in aan leenahay in aan idinla wadaago: Don 't dib u dhac. Qof kasta ayaa sheegay in ay taageerto kor u xogta iyo in la abuuro waa wax DVDs doonaa ay 'si aad u hesho qiyaastii.' Ha noqon qof, kuwaas oo had iyo jeer ku talo si aad u hesho DVD abuure for Windows 10 iyo dib ilaa xogta ay ka dibna ma heli agagaarka waa in ilaa inta ay goori goor tahay. Waxa aad qabtaa waxa aad u baahan tahay si ay u sameeyaan DVDs, si aad u hesho in ay maanta!
Top 11 DVD Making Best Software
Top 10 Best DVD gubi for Windows 10
Top 30 ciyaaryahan Blu-ray 2015
Top 20 ciyaaryahan dhab ah dib u eegista iyo waxyaabaha kale ee
Freemake dib u eegista video Converter oo kale oo
> Resource > Top List > Top Toban DVD Creator Wixii Windows 10